गोरखामा कृषकलाई हाते ट्याक्टर वितरण, को-कसले पाए ट्याक्टर ? - Samachar PatiSamachar Pati
गोरखामा कृषकलाई हाते ट्याक्टर वितरण, को-कसले पाए ट्याक्टर ?
गोरखा, ६ फागुन (रासस) । गोरखा नगरपालिका गोरखाले नगर क्षेत्रभित्रका व्यावसायिक कृषकहरुलाई हाते ट्याक्टर वितरण गरेको छ ।
नगरपालिकाले आइतबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी नगरभित्रका १३ वटा वडाका २८ जना कृषकलाई ट्याक्टर वितरण गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षको कृषि औजार वितरण कार्यक्रमअन्र्तगत नगरक्षेत्रभित्र कृषि प्रणालीलाई यान्त्रिक र आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ ट्याक्टर वितरण गरिएको नगरप्रमुख राजनराज पन्तले जानकारी दिनुभयो ।
नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचनामार्फत सबै वडाका कृषकलाई निवेदनका लागि आह्वान गरी छनोटमा परेका कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा ट्याक्टर उपलब्ध गराएको उहाँको भनाइ छ । “हामीले निवेदन दिएका कृषक व्यावसायिक कृषक हो की होइन पुष्टी गरेर मात्र अनुदानमा ट्याक्टर उलपब्ध गराएका हौँ, नगर प्रमुख पन्तले भन्नुभयो, गैह्र किसानहरुले अनुदान लिन नपाओस् भन्नेमा नगरपालिकाले सचेत भएर काम गरेको छ ।”
वितरण गरिएका २८ मध्ये ६ वटा कृषि समूह र २२ जना भने व्यावसायिक कृषक रहेको उहाँले बताउनुभयो । कृषकलाई वितरण गरिएको ट्याक्टर ७.५ हर्जपावर क्षमताको रहेको र उक्त ट्याक्टरले प्रतिघण्टा रोपनीसम्म जमिन जोत्न सक्ने नगरपालिकाका प्रविधिक सहायक नवीन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र कृषिजोनबाट अनुदान नपाएका कृषकलाई छनोट गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । ट्याक्टर वितरण अघि अनुदान प्राप्त गर्न छनोटमा परेका सबै कृषकको बारेमा नै घरघरमा पुगेर वास्तविक किसान भए नभएको बारेमा जानकारीसमेत लिएको उहाँले बताउनुभयो ।
नगरपालिकाले टेण्डर आह्वान गरेर कम दरमा उपलब्ध गराउने गरी मनकामना मिल मेशिनरी सप्लायर्सलाई ट्याक्टर खरिदको जिम्मेवारी दिएको थियो । सप्लार्यसले प्रति ट्याक्टर रु ५४ हजार ९ सय ५० मा नगरपालिकालाई ट्याक्टर उपलब्ध गराएको अधिकारीले बताउनुभयो । कार्यक्रमअन्तर्गत नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि रु १० लाख विनियोजन गरेको थियो ।
ऋषिङमा परामर्श मञ्च गठन
सात प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै तेस्रो ‘मिस क्विन लेखनाथ’उपाधि ज्योति खत्रीले जितिन्
गोली हान्न सिकाउने क्रममा प्रहरी जवान घाइते